Ezi ncheta ọmụmụ in English. Ezi ncheta ọmụmụ Meaning and Igbo to English Translation
Home>Words that start with H>Happy birthday>Ezi ncheta ọmụmụ (Igbo to English translation)
What does Ezi ncheta ọmụmụ mean in English? If you want to learn Ezi ncheta ọmụmụ in English, you will find the translation here, along with other translations from Igbo to English. We hope this will help you in learning languages.
Here is Ezi ncheta ọmụmụ meaning in English:
Gịnị bụ gị atụmatụ maka nke a izu ụka?
Ị na-arụ ọrụ taa?
Ị pụrụ igosi m ebe ọ bụ na map?
Ihe onwunwe na-uwe mere nke?
Ime ụlọ nwere akwa abụọ ga-amasị m
Ole ga-amasị gị?